R & D - Shanghai Huitian Qalabka Cusub Co., Ltd.
40 sano roobab farsamo Abuur alaab tayo sare leh asal ahaan
312 teknoolojiyad patenti ah
19 shahaado idman
100+ Shahaado sharafyo
Huitian waxaa si wada jir ah ugu aqoonsaday "xarunta farsamada ganacsiga qaranka" shan wasaaradood.
Horaantii 2012, Akadeemiyada Shiinaha ee Sayniska iyo Akadeemiyada Shiinaha ee Sayniska ayaa si wada jir ah u aasaasay "xarunta ying hua hui tian waxqabadka sare ee koollada qalabka farsamada injineernimada."
20+ Kooxaha cilmi baarista ， oo daboolaya silikoonka, acrylate, cusbada epoxy, polyurethane iwm. 10+ Nooca soosaarayaasha.
Shirkaddu had iyo jeer waxay dhigtaa cilmi-baarista tikniyoolajiyadda iyo horumarka iyo hal-abuurnimada meesha ugu horeysa. Sannadkii 2013, waxay maal-gashatay oo ay dhistay xarun-koowaad & r-d xarun gudaha ah oo loogu talagalay dhejiska injineernimada ee Shanghai.
4 Xarumaha R&D
12 Shaybaarada kormeerka tayada
6 Shaybaarada arjiga
Shaybaarka xabagta ee Epoxy
Shaybaarka xabagta UV ……
Qolka imtixaanka waxqabadka soo socda:
- Heerkulka iyo huurka joogtada ah
- Daal ka-hortagga
Meelaha arjiga ：
Baakadaha rogrogmi kara
Waxay si isdaba-joog ah u aasaastay shaybaarro wadajir ah oo leh Machadka Shiinaha ee Sayniska, Jaamacadda Shanghai fudan, Jaamacadda injineernimada ee Shanghai, jaamacadda hunan, machadka cilmi baarista qalabka faw, xarunta tiknoolajiyada shenlong iyo akadeemiyada Shiinaha ee sayniska tareenka, taasoo ka dhigaysa huitian inay hoggaanka u qabato tiknoolajiyada Shiinaha.